N’agha agha a, na mgbakwunye na masks, Uwe nchedo, Ihe ndi ozo eji amu akwa? - Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd.
N’agha agha a, na mgbakwunye na masks, Uwe nchedo, Ihe ndi ozo eji amu akwa?
Ememe Oge A, n'ihi ọnya na-efe efe na mberede ọnya ụbụrụ na-efe efe na ihe ọhụrụ, Ọnọdụ ọhụrụ nke ntiwapụ nke nje n'oge a na-emetụta obi ndị mmadụ. Ugbu a, ọgụ a na-alụso ọrịa a ka na-ama ihe isi ike, mana n'okpuru mgbochi na njikwa ndị mmadụ n'ofe ala ahụ, anyị kwenyere na ọgụ na njikwa ọrịa a, anyị ga- emeri.
Dị ka ụlọ ọrụ ihe nkwụba ama dị mkpa nke akụ na ụba mba, industrylọ ọrụ akwa akwala ọfụfụ kemgbe ọtụtụ afọ. Karịsịa na mmepe ngwa ngwa nke teknụzụ na-adịghị ere, a ka na-amụbawanye maka ngwa ndị eji eme ihe na mpaghara akwa akwa, nke keere òkè dị mkpa na mbuso agha ahụ agha. Akwụkwọ a sitere na nchedo iche, Idebe onwe ya yana iwu ụlọ ọgwụ na-adịru nwa oge yana mpaghara atọ ndị ọzọ na-eche maka ọha na eze iji gosipụta ntinye nke akwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
1. Ihe nkpuchi ahụ ịwa ahụ
Masks bụ ihe dị mkpa kwa ụbọchị maka ndị ọrụ ahụ ike iji gwọọ ndị ọrịa na ndị mmadụ ka ha pụọ ​​maka nchebe n'ọnọdụ a ọrịa. Ugbu, Ihe nkpuchi ndi isi ogwu China bu ndi nke ato: masks ahụike nwere oke nchebe, Igwe anwa anwa na-ejikarị na gburugburu ebe ọrụ arụ ọrụ dịka ime ụlọ yana masks ịwa ahụ nke ọkwa nkịtị. Ihe ndị a masks ịwa ahụ na-abụkarị polypropylene, ihe owuwu a bu nke otutu ihe eji eme otutu. Ihe owuwu kachasị ewu ewu bụ usoro SMS (i.e. Spunbonded -- ọgbaghara-iru). Ihe ngwongwo na-adị n'etiti etiti na-spunbonded na-enweghị ihe eji arụ ọrụ nwere ezigbo nzacha nzacha nje. (maka nke ozo, ahụ: sayensị na masks)
2. Uwe mkpuchi ahụike
Uwe mkpuchi ahụike nwere ike igbochi mwakpo nke nje na nje, ọ dịkwa nnukwu mkpa ichebe nchekwa nke ndị ọrụ ahụike na ndị ọrụ n’ebe ọha. Ugbu a, Imirikiti uwe mkpuchi ahụike na-ejikwa akwa a na-anaghị akwacha akwa dị ka akụrụngwa bụ isi. Ihe ndị a na-ejikarị n'ahịa gụnyere tumadi polypropylene spunbonded akwa, spunlaced akwa jikọtara nke polyester eriri na osisi pulp, polypropylene SMS nonwoven akwa na ụfọdụ nonwoven mejupụtara ihe. (maka ozi ndi ozo, Lee ntụle aka: Kedu ihe ndị a na-eji maka akwa mkpuchi ahụike)
3. Mbadamba ọgwụ mmanya ọgwụ ọgwụ
Ihe ndabere nke mbadamba ọgwụ mmanya na-egbu egbu bụ ihe a na- edoghị edo, na nhazi teknụzụ bụ azụ mmiri, akụrụngwa nke USES nwere ike ịbụ fi viscose, eriri polyester, polyethylene ma ọ bụ polypropylene. Mgbe agbakwunye mmanya na ngwaahịa ahụ, o nwere njirimara nhicha, antibacterial, ngwanu ngwangwa, ikike njigide mmiri siri ike na ike ọrụ dị elu nke ihe eji achọ ahụike, enwere ike iji ya mee ihe maka ọgwụ mgbochi tupu ogwu ogbugba na ịwa ahụ mberede. Enwere ike iji ya maka nhicha ma na-ehichapu ihe ndị dị n’ụlọ, ihe ụmụaka ji egwuri egwu, etc.
4. Na-ekpochapụ ekpochapụ
Ndị na-ehichapụ ọnya nwere njiri mara dị mfe ebu na ojiji, enwere ike ịrụ ọrụ nhicha na mmerụaka na nchedo njem nke mmadụ. Inkpachapụ akwa nhicha mmiri bụ akwa nwere akwa na-enweghị ntụpọ nkịtị, akụrụngwa dịka ihe na-agbakwunye disinfectant kwesịrị ekwesị na-eme ka ngwaahịa dị ọcha ma na-ehicha ya, nwee ezigbo anụ ahụ na-enwe mmetụta na ọ na-arụ ọrụ, enwere ike iji ya ọcha nke aka ndi mmadu mgbe ị na-apụ apụ ma na-ekpochapụ ebe nchedo ebe ọha na eze.
N'ime usoro iwu ụlọ ọgwụ ugwu ugwu, oyi akwa nke ntọala ya na - anabata ntọala nke "20cm uzuoku + polypropylene filament nonwoven geotextile + HDPE geotextile + polypropylene filament nonwoven geotextile + ájá ájá", ya bụ ihe owuwu nke "akwa abụọ na otu ihe nkiri". Emere ya site na kpo oku nke ghneventi na geotextile site na kpo oku nke oma na akuku geofilm., nke a na - agwakọkọta ọnụ site na usoro fluidization ma ọ bụ site na onye nduzi. N'etiti ha, nonteven geotextile nwere ike igbochi akụ ahụ dị nkọ na ala iji chebe geotextile (maka ozi ndi ozo banyere geotextile, biko rụtụ aka na mbipụta okwu anyị pụrụ iche na textiles dị n'ime 2019).
Na mgbakwunye, n'ihi ọdịdị ala ugwu ugwu na ụlọ ịgba ọgwụ nwa oge a na-ewu ụlọ na arụ ọrụ dị mkpa, mbipụta a na February 7 na WeChat ga-arara nye mmeghe ya zuru oke, nọrọ na-ekiri!
(isi mmalite: textile kwa ụbọchị)
Kedu ihe bụ yarn kpuchie?